Tsara ve ny marika amin'ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Jereo ny bisikileta alefa - ahoana no fomba fiasa
Jereo ny bisikileta alefa - ahoana no fomba fiasa
Tsara ve ny marika amin'ny bisikileta?
rahaJEREOfantatra amin'ny maha mpisava lalana ny pedal tsy misy clip, ny frantsaymarikakoa dia mpandray ny teknolojia fitrandrahana karbaona tany am-boalohany, nanao bisikileta mitambatra ho an'ireo tia an'i Greg LeMond niverina raha mbola nibolisatra vy ny sisa tavela amin'ny peloton.
Inona ny bisikileta tsara indrindra vidiana? Um. Segondra iray monja, raha ny marina. (Hira upbeat) Mazava ho azy fa ity fanontaniana ity dia tena sarotra valiana, tsy hoe satria sarotra ny mitady bisikileta tsara, fa ny tena marina satria miankina aminao indrindra ilay bisikileta ilay bisikileta tsara indrindra.
Raha tokony hanontany hoe inona ny bisikileta tsara indrindra dia tokony hanontany kosa isika hoe ahoana no hividiananao ny bisikileta tsara indrindra ho anao? Ny teboka voalohany amin'ny fividianana ny bisikiletanao tsara indrindra dia ny teboka voalohany ahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny ilainao izany. Andao hifantoka amin'ny bara mitete eto isika izao. Raha te-hihoatra ny làlana ianao, dia eritrereto ny mividy bisikileta an-tendrombohitra.
Ankehitriny ny bisikileta cyclocross na gravel toa ireny dia be dia be tokoa ary mahafinaritra be eny an-dalana raha mbola milamina. Raha ny tena izy, ny familiana an-dalambe voadidy adrenaline, na izany aza, ny kodiarana matavy amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia mahafinaritra fotsiny. Tsy dia mora tohina ianao ary misy vato sy fotony, noho izany dia mitondra fiara milamina kokoa ianao, mitondra fiara haingana ary koa li. dia kely hahazoana kodiarana fisaka.
Ary ahoana ireo bisikileta gravel na cyclocross? Toy ny bisikileta amin'ny hazakazaka ihany izy ireo amin'ny ankapobeny, na dia somary miadana kokoa noho ny bisikileta aza izy ireo mandritra ny adiny iray noho ity bisikileta ity. Eny, mety ho zava-dehibe aminao io na tsia, saingy zava-misy izany. Ka raha te hihazakazaka eny amin'ny arabe ianao dia mila mividy bisikileta.
Amin'ny zavatra hafa rehetra, ity bisikileta ity dia mety ho tonga lafatra. Azonao atao fotsiny ny mamihina ireo kodiarana lehibe kokoa, mandehandeha mizaha, mitaingina arabe mangalatra izay tsy ho voakasikao amin'ny tsato-by, amin'ny bisikileta toa izao. Ireo koa dia tena mafy orina, ka afaka mitondra fiara am-pifaliana isan'andro ianao mandritra ny ririnina, miaraka amina seza zaza miraikitra ao an-damosinao.
Tena soavaly fiasa io. Raha heverina fa tsy maro amintsika no tena mihazakazaka, misy dikany ve ny mividy bisikileta amin'ny hazakazaka? “Eny eny, azo antoka fa misy teboka iray amin'ny fividianana bisikileta amin'ny arabe. Haingam-pandeha izy ireo, izay midika koa fa mora kokoa ny manohy y na dia ny kitaponao aza izany.
Mamaly kokoa izy ireo, velona kokoa izy ireo, miakatra tsara kokoa izy ireo, afaka miala ambany kokoa izy ireo, afaka mihodina tsara izy ireo. Fiara fanatanjahan-tena kely io, fa ho an'ny vidiny iray. Ary raha ny tena izy dia bisikileta amin'ny hazakazaka maro no tsara kokoa amin'ny mitaingina vatokely noho ny noeritreretinao azy.
Ny teboka manan-danja manaraka, na ny voalohany aza tsy afaka nanapa-kevitra izahay, dia ny mety, tena ilaina tokoa amin'ny fitadiavana ny bisikileta tsara indrindra ho anao. Tsy mila mampiasa vola amin'ny fametahana bisikileta matihanina intsony ianao izao. Raha mividy amin'ny fivarotana malaza ianao dia tokony ho afaka hanampy anao hahita ny habeny mety. marina izany, mifantoka amin'ny haavon'ny lasely.
Tena mora ny manitsy azy io. Ka ny zavatra misy fiatraikany bebe kokoa amin'ny atao hoe bisikileta mety dia ny tratry ny fihodin-tanana sy ny hahavony. Ka raha manana toerana fohy na avo ianao dia azo inoana fa mila mividy bisikileta manome anao izany.
Ka bisikileta misy karazana fiaretana, fa raha tianao ny toerana lava kokoa sy mihinjitra kokoa dia mety hahita bisikileta miaritra ianao tsy mahazo aina. Noho izany dia mila misafidy bisikileta nentim-paharazana, maivana, na endrika zana-tsipìka ianao. Taloha, ny maivana dia ny be sy ny farany rehefa mividy bisikileta.
Ny bisikileta maivana kokoa dia haingana kokoa. Na izy ireo dia mandra-pahatongan'ny bisikileta aerodynamika, ary ara-teknika haingana kokoa izy ireo amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra mitaingina rehetra. Saingy lafo ihany koa izy ireo, ka ny fitazonana ny vidiny kely kokoa dia tokony ho iray amin'ireo hevi-dehibeo.
Araka ny nolazaiko, ny bisikileta maivana kokoa dia haingana kokoa ary mahazaka olona ary mahomby kokoa ihany koa. (mozika faly) Misy safidy efatra. Fibre vy, titanium, aluminium ary carbon.
Na iza na iza dia azo aorina anaty bisikileta tsara, ary samy hanana ny mpanohana azy ny tsirairay. Miaraka amin'ny teti-bola ambany, ny lanjan'ny frameset no mety ho zava-dehibe aminao. Ka ny vy mora vidy dia mavesatra be, fa tena henjana sy mafy orina tokoa; maivana kokoa ny aliminioma, ary avy eo ny fibre karbaona dia maivana kokoa.
Raha maro ny mpitaingin-tsoavaly manandrana manao ny fitsambikinana amin'ny vatan'ny fibre karbaona faran'izay haingana, dia mazàna aho mihevitra fa ny bisikileta vita amin'ny aliminioma ho an'ny vidiny mitovy dia matetika no safidy tsara kokoa, ary betsaka amin'izany ny vokatry ny fizaran-tany. Ny fitaovana lafo vidy kokoa dia toa mandeha tsara sy malama kokoa, mahatratra hatrany amin'ny 1.000 euro, dolara, marika pound ho an'ny bisikileta. Ary avy eo izy ireo dia mihamazava, tsy misy afa-tsy ireo fitaovana elektronika izay mandeha tsara kokoa.
Miala tsiny ry zareo. Eny, ny isan'ny lakile dia tsy tokony ho olana lehibe loatra. Afa-tsy ny fitaovana kely kokoa any aoriana dia mety hidika ho fahombiazana kely kokoa sy lanjany kely kokoa.
Ny kodiarana sy ny kodiarana dia mety hisy fiatraikany na hanimba ny kalitaon'ny dia. Ka ny maivana sy maivana dia mety hisy fiovana eo amin'ny bisikiletanao. Ka rehefa mividy vaovao ianao dia aza hadino ny mijery an'izay voalaza ao, ary mety hanao sorona hafa any an-toeran-kafa amin'ny bisikileta mba hahazoana karazana varimbazaha madio.
famerenana bisikileta goavambe
Ahoana raha ny bisikileta tadiavinao hovidiana dia tonga miaraka amin'ny Comes iray miaraka amin'ny lasely izay tsy tianao, na miaraka amina tadivavarana sy tadiny? Ovainao izy ireo. Ity no apetranao amin'ny teti-bola kely kokoa, angamba ny fividianana andiana pedal tsy misy clip na mividy tsangambato misy endrika hafa izay tianao kokoa dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny bisikileta. Miezaha ihany koa mba tsy hampihemotra anao amin'ny singa iray na roa amin'izay mety ho bisikileta tsara indrindra ho anao.
Tsy latsa-danja indrindra, ny fijery ny bisikiletanao, ny hatsarany. Eny, heveriko fa mety mendrika ho avo kokoa ao amin'ny lisitray izy ireo, na dia toa tsy toy ny fomba misaina indrindra hisafidianana bisikileta aza izany. Raha tena tianao ny endrik'ilay bisikileta, raha mahavoa haingana kokoa ny fonao isaky ny mahita azy ianao dia bisikileta tsara be izany eo imasoko ary azonao atao angamba ny mamela izany noho ny lesoka rehetra vitany raha mahita azy isaky ny mahita azy ianao, te-handeha bisikileta ianao.
Bisikileta mahafinaritra io. Ary ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany dia ampahafantaro anay izay heverinao fa bisikileta tsara indrindra ho anao, nahoana ary inona no tena izy? Avy eo misoratra anarana amin'ny GCN koa. Mba hanaovana izany, tsindrio tsotra izao eto an-tany.
Raha mitady votoaty misimisy kokoa izay afaka manampy anao hanapa-kevitra ny atao hoe bisikileta tsara indrindra izahay, dia misy lahatsoratra tsara eto dia ny Endurance Bike vs Arrow Bike vs Lightweight Bike. Na, miaraka amin'ity zavatra cyclocross vs road rehetra ity, eo fotsiny izany.
Tsara ve ny bisikileta Look?
Famaranana. Amin'ny ankapobeny, nyJereodia tenabisikileta mahafinaritramitaingina toe-javatra maro, ary manohitra ny fanoherana dia tsara izanyTSARAeo amin'ny lafiny vidiny mandinika ireo teknolojia sy fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana azy.
Inona no bisikileta tsara indrindra?
Fixie mangingina indrindra: FanjakanaBisikiletaInona.
Tsara indrindraFixie Commuting an-tanàn-dehibe: fitaovana fiambenana haingam-pandeha an'ny Retrospec HarperBisikileta.
Fixie Aluminium mora vidy indrindra: 6KU Aluminium Fixie Fiara Fiara Hafainganam-pandeha.
Fixie mampihetsi-po indrindra: GoldentsingerinaFiadiana haingam-pandeha tokanaBisikileta.
Tsara indrindraItaliana mitaingina: Bianchi Pista Fixed GearBisikileta.
eto Berlin izahay amin'ny tompon-daka amin'ny hazakazaka am-bisikileta ary misy môtô mahafinaritra toa ny bisikileta mandeha lafo indrindra eran'izao tontolo izao mitaingina ny iray amin'ireo bisikileta ireo fony aho teo amin'ny ekipa gb track ary tena bisikileta nahafinaritra tokoa ireto nitaingina ireto Ny voltives dia natsangana taorian'ny Lalao Olaimpika tao Rio ho toy ny kinova vaovao, nohatsaraina, ny haben'ny karbaona dia lehibe kokoa ary fantsona ambony 57cm misy loko namboarina avy amin'ny haitao mavokely Silverstone izao dia mpankafy ny fandokoana amin'ity bisikileta ity aho, indrindra ny antsipirian'ny sainam-pirenena eo an-tampony dia mihazakazaka eo amin'ny 165 cranks miaraka amina chain chain Ub ary misy Eurasiasprocket ao an-damosina miaraka amina rojo Reynolds mahafinaritra ho an'ny tompon-daka eran-tany izay mihazakazaka amin'ny kodiarana Ghibli ny ekipa bisikileta anglisy miaraka amin'ireo kodiarana Victoria Pista Speed ​​ankehitriny ireto kodiarana ireto dia malaza eto amin'ny fiadiana ny tompondaka eran-tany amin'ny bisikileta ary hitanay ny seza Cervelo miaraka amin'ny ekipa GB Custom Sa amin'ny bisikileta rehetra. Jason koa dia nisafidy lasely Physique Antara miaraka amin'ny Shimano Dura -Ace pedal dia misy sombin-tsakafo mahafinaritra amin'ity bisikileta ity koa, ao anatin'izany ny bara JasonKenney vita vita manokana sy ny vatan'ny pirinty 3D izay tsy ho anao no mividy ireo kitapom-baravarana na aiza na aiza satria namboarina ho an'i Jason Kenney fotsiny oh, ary misy koa titanium volamena bolt amin'ny faran'ny andro dia medaly medaly olimpika enina izy ka mety ho mendrika an'io bolt titanium volamena io, izao mivoaka ity bisikileta enina teboka fito ity dia be ny resaka momba ity bisikileta ity ankehitriny, mazàna indrindra satria izy angamba no iray amin'ireo be indrindra bisikileta lafo vidy eran'izao tontolo izao, mitentina £ 55,000 fotsiny ny endriny ary rehefa ampidirinay ny zava-drehetra dia antenainao fa mitentina £ 60,000 izay natao manokana ho an'ny hetsika sprint namboarina teny an-dàlana ary manana haitao tena tsara. Andeha hojerentsika akaiky, ity ilay ekipa bisikileta Track Cycling Malay sian, raha toa ka tsy misy afa-tsy amin'ny habe roa ny WX for Tech One Edition, asmall sy medium, ny frame kely dia mahatratra 396 milimetatra fa ny afovoany ny iray dia miditra amin'ny 474 milimetatra ka raha mitaingina fefy lehibe ianao dia mety tsy ilay bisikileta ho anao io araka ny fahitanao azy fa bisikileta tena mahafinaritra io ary ireo seza telo dia toa mitovy amin'ny Hope Lotus -Bike Ity bisikileta ity dia manana asa fandokoana manokana ihany koa ary tena nolokoin'ireo olona nandoko ny baolina mena F1 fiara, ny ekipa dia fiara mihazakazaka sy ny rojo vy ary ny bisikileta dia afaka mamadika amin'ny 68, ankehitriny dia tena lehibe, izy io koa dia mifandray amin'ny nezumi fahavalo amin'ny kodiarana tsy misy hatak'andro izay manana tompona orinasa Ghibli ao an-damosina ary misy Vo eo anoloana manana motera miteny efatra. Super tery ho an'ny famaky aloha tery ary ny kodiarana roa dia mifamatotra amin'ny kodiarana Speed ​​Victoria Safidy iray hafa tena malaza eto amin'ny World Track Championships eo am-pelatanana ankehitriny ary ireo dia tena tantely slickin tsara tarehy miaraka amin'ny sakan'ny tohiny 30 santimetatra ary ireo dia tena fohy ny halavan'ny tànana dia natao hametrahana ny tanan'ny mpitaingina eo amin'ny toerana aerodynamika farany oh ary ny sandan'ny fividianana £ 10.000 ity bisikileta ity dia misy lasely manokana avy amin'ny pedal Shimanojiriz sy crank herinaratra SRM ao amin'ity milina hazakazaka feno milanja fito milanja dimy Kilos na ankehitriny namboarina manokana Heveriko fa £ 60,000 dia be dia be amin'ny bisikileta mandeha fa aleo hojerentsika izay misy ny mpijery eto, ny eritreritry ny kamio amin'ny tompon-daka eran-tany, ohatrinona no andoavanao bisikileta, angamba manodidina ny £ 15,000 amin'ny 60000 eo ho eo ny bisikiletiko dia tsy dia tsara loatra ho an'ny ohatrinona no halehanao amin'ny iray Karama amin'ny bisikileta mandeha? Oh toy ny arivo, okay, satria tsy manam-bola be aho, okay, ny bisikileta malay dia enina alina kilao ka afaka mandoa ve ianao? be loatra ve ianao tsy handoa vola be ka tsy hampihena mihitsy, izany hoe enina hetsy sy sasany kilao no handoavanao ka ohatrinona no aloany? Bisikilety kamiao kely dia kely angamba roa alina, izay tokony ho enina alina tsy miaraka amin'ny fenoko bisikileta fa azo antoka fa iray amin'ireo mafana indrindra sy raiko haingana toy ny bisikileta, ireto ny kamio toy ny tompon-daka eran-tany, Philippe Oganas. ny lalana toa ny vaovao avy amin'ny famakiana ny mens lehilahy efatra karazana akanjo tsara eto dia ny lozisialy mitovy endrika namotika an'i Wiggins ny tontolony, ny rakitsoratray momba ny kitapom-batsy dia fanaovan'i Pinarello fanaovan-tsoa ary araka ny ahitanao ireo zavatra hafahafa mijery eo ambonin'ny felatanana ireo dia ity 3d ity tànana vita pirinty ho an'ny tanan'i Gala mba hahatonga azy amin'ny toerana mety tsara aerodynamika tsara indrindra Wiggin koa dia nitana fika mitovy amin'izany amin'ny bisikiletany.
Ny rojo vy dia rojo vy voankazo 2 avy ao amin'ny Aerocoach ary mahaliana ahy, nanana crank power RoadSRM niaraka tamin'ny rojo Aninch namboarina toa ny maro teny amin'ny làlana hitany vita tanana amin'ny bisikileta Campagnolo Ghibli any Italia ny kodiarana eo aloha dia manana axis tery , ireo lalao rehetra ireo sy ny ekipa Italiana izay misy ahy ao amin'ny Vi. mampiasa ctoriapistol Speed ​​Tyres dia voahodina miaraka amina toe-batana Sadler ary fikitika mahazatra eo an-tampon'ny kaontenera eo amin'ny latabatra countersunk post tsara fantatro ihany koa fa tokony hiresaka amin'i SirChris Hoy ny tenany momba ny sasany amin'ireo fitoeran-bisikileta eto amin'ny World Cup, okso any dia teknolojia vaovao be dia be eto amin'ny Thetrack Tompondaka Eran-tany inona ny hevitrao momba azy ary inona no hevitrao ho zavatra mahaliana indrindra hitanao hatrizay dia misy teknolojia vaovao be ary sarotra indrindra ny mahafantatra raha toa ka tsara satria ho ekipa maro hatreto no tazomina miaraka amin'ny fitaovany amin'ny Lalao Olaimpika, tsy te-hiseho be loatra izy ireo, mila mitaingina bisikileta alohan'ny Lalao Olaimpika, tsy afaka miseho fotsiny amin'ny lalao amin'ny lalao bisikileta vaovao ka ny ekipa tsirairay dia miakanjo akanjo na teknolojia vaovao ary ny ilanao dia hanamarina fa tsy maninona ary avy eo dia hesorin'izy ireo indray ka ny ekipa GB dia nampiasa ny akanjo hoditra olimpika sy ny bisikileta GB u an'ny Lotus Manantena bisikileta Ithink any Glasgow amin'ny World Cup Soyeah any? Betsaka ny zava-baovao mampientam-po any, ary matetika tsy izy no mahery fihetsika indrindra izay manaitra indrindra na manaitra. Soyeah sarotra eo ambanin'ny soson-doko amin'ny sosona karbôna kely izay mampiavaka azy io, satria mikasika ny hamafiny sy ny fahombiazany ary ny fahaizan'ny rivotra na ny kodia ary mahaliana fa tsy mampiasa bisikileta tsara indrindra i GB eto - izy ireo dia tsy manao ' Aza mampiasa kodiarana olympika inona araka ny eritreritrao ny antony mahatonga izany dia nentim-paharazana dia ny ekipa GB notazoniko hatrany amin'ny minitra farany ny zava-drehetra mba ho fantatrao fa nanofa palitao hoditra izahay tamin'ny fotoana hazakazaka izay azonao vidiana 60 na 70 pounds amin'ny toerana iray. fivarotana bisikileta, ary raha tonga tany amin'ny hoditr'izy ireo mahazatra izy ireo dia nihatsara nanomboka tamin'izay, saingy mba hanomezana anao izany fisondrotana ara-tsaina sy fampiroboroboana teknolojia izany.
Zava-dehibe ny moto, mazava ho azy, saingy tsy izay rehetra tsy Formulaone no tadiavinao ho hitanao fa ny atleta no tsy mitovy amin'ny kodiarana na bisikileta na fiarovan-doha na hoditra. Mandritra izany fotoana izany sy amin'ny maha-mpankafy ahy atech fantatro tsara ny mahita ny ekipa tonga miaraka amin'ny Ny fomba hanatrehany ny piozila mitovy amin'ny lafiny samihafa dia misy fetra voafetra izay napetraky ny UCI amin'izay azonao atao amin'ny bisikileta afaka sy Tsy afaka manao toa tsara izy ireo ary samy hafa ny fepetra takian'ny hetsika rehetra - koa misafidiana bisikileta antenaina fa hiasa amin'ny hetsika rehetra, na, toa an'i Israel ny divay avy any Malezia, dia mila bisikileta ho azy izay inoako fa mitentina $ 60,000 sa 6000 $? Ny vola sy ny famokarana dia vola be amin'ny bisikileta fa vola be izany nefa inona no andoavanao vola amin'ny bisikileta amin'ny volanao manokana heveriko fa hanandrana manohana any amin'izay eritreretiko aho raha mino mafy ianao fa mandeha io? Mampisy ny tsy fitoviana rehetra ary raha fantatro fa mandeha tsara izany ary hitantsika hatramin'izay, ho toy ny 9.5 sy ny hiran'ny feon-kira ataonao, izay fotoana mahatalanjona ho azy, na mampisy fahasamihafana ara-tsaina izany na tsia, rehefa mandeha any am-piandohana izy ary mieritreritra fa eo izy, fantatrao ny fitaovana mitovy na tsara kokoa noho ny olon-kafa rehetra any izay tokony hanome anao fahatokisan-tena, noho izany dia nilamina tokoa ny fananana bisikileta tsara indrindra eran-tany. Manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity ary azafady mba ampahafantaro anay izay hevitrao tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany
Aiza no anaovana bisikileta fijery?
Amin'ny paompy ny andro manaraka dia fitsidihana an'iJereoNy orinasan'ny bisikileta Cycle izay misy ny sisin-dàlana rehetra dia mamita ny asany hatramin'ny lasavokarinaamin'nyJereo itytoeram-pamokarana ivelan'ny tranokala any Tonizia.01.25.2012
Inona ny fanavaozana lehibe amin'ny bisikileta an-dalambe? Eny, nisy vitsivitsy, nefa tsy isalasalana fa ny iray amin'ireo fanavaozana tena lehibe indrindra dia ny pedal tsy misy clip. Ampiasaina be izy ireo ankehitriny, saingy tsy izany foana no izy. Tamin'ny 1985, rehefa nandresy ny Tour de France tamin'ny pedal tsy misy clip i Bernard Hinault, dia nahasarika ny mason'izao tontolo izao.
Ary nanao izany izy tamin'ny alàlan'ny LOOK Pedal Automatic malaza ankehitriny. Ka nanapa-kevitra ny hanao lahatsoratra momba ny fampandrosoana ny. mba hanao pedal tsy misy clip ary hijery ny fomba fanaovana azy ireo ankehitriny.
Ary raha te-hanao an'izany dia nieritreritra izay olona tsara hiaraka aminay izahay fa tsy ireo mpisava lalana mitondra pedal tsy misy clip, LOOK. LOOK dia manana tantara sy fomban-drazana mahavariana tokoa amin'ny pedal tsy misy clip. Ny zavatra mahaliana momba azy dia ny tantaran'i JEREO teo aloha fa zavatra hafa tokoa.
ny fomba fitondrana zavatra amin'ny bisikileta
Fatorana ski. Ary nitady loharanom-bola hafa ny orinasa rehefa, tsy ririnina. Ary dia nivadika bisikileta izy io ary nanomboka tamin'izay dia mbola nanohy nampivoatra sy manavao ny teknolojia pedal tsy misy clip i LOOK, ary tsy niherika intsony izy nanomboka teo.
Noho izany tsy misy lalao amin'ny teny miverimberina ampiasaina. Ny famolavolana fanalahidy manaraka dia ny LOOK Carbo Pro miaraka amina tranga aluminium izay nahavita tsara azy io teo amin'ny lafiny mateza sy lava. Saingy mavesatra be ilay izy, noho izany dia te-hanao pedal maivana kokoa i LOOK raha azo atao satria ny bisikileta bisikileta dia variana hatrany amin'ny lanjan'ireo ampahany aminy.
Ka nanao ny CX7 nivoaka tamin'ny taona 1993 izy ireo ary tena pedal mahafinaritra satria tena vatan'ny fibre karbaona ary io no pedal voalohany nanao an'io. Ary tena azo namboarina ihany koa, azonao atao ny manitsy ny singa Q ary koa ny firongatr'ity pedal ity, izay tena mahaliana. Saingy tsy fahombiazana ara-barotra goavambe ho an'ny LOOK satria tena lafo vidy.
Avy eo dia navoakan'izy ireo ity, ny LOOK Keo, izay mampiasa ny cleo Keo kely kokoa fa tsy ny valisoa Delta lehibe kokoa hita eo amin'ireo pedal taloha. Ity koa dia nanana vatana fibre karbaona ary tena maivana tokoa. Avy eo nihatsara hatrany ny teknolojia, mandraka androany dia nifindra tamin'ny volom-borona izy ireo ary namoaka an'ity, ny LOOK Keo Blade ary ilay voalohany ahitanao azy dia manana lohataona ravina Carbon fa tsy loharano vy any aoriana. ny cleat koa dia manana axe titanium hampahazava kokoa azy ary tena maivana.
Ary izany dia mitondra antsika mandraka androany, ny LOOK Keo Blade Carbon ankehitriny ary ankehitriny dia hitanao fa lehibe kokoa ny antsy ary mameno ny vodin'ilay pedal. satria io no mahatonga ny pedal ho lasa aerodynamika kokoa ary tsara kokoa ho an'ny airflow izay miditra ao ambaniny. Ary raha manontany tena ianao hoe inona ny fahasamihafana eo anelanelany sy ity.
Milanja 90 grama eo ho eo izy, ary milanja tsara, 200 grama mahery, fahasamihafana lehibe. Ny pedal tsy misy clip dia mety ho toa zavatra tsotra, fa raha ny tena izy dia misy injeniera tena mahavariana ao aoriany. Ka eto aho manana ny singa tsirairay mandrafitra ny LOOK Keo Carbon Blade Titan, ny pedal LOOK mandroso indrindra amin'izao fotoana izao.
Voalohany dia ananantsika ity, ity no vatan'ny pedal ary izy io dia vatana mitambatra karbaona vita amin'ny tsindrona. Ary avy eo manana takelaka vita amin'ny firaka vy mifatotra amin'ny toerany ihany koa izy; manana ny lamosin'ny pedal ianao, izay bitika mitazona ny tadinao ary, raha tianao, dia azo antoka amin'ny alàlan'ity karazana axle ity. Ary eo koa ny lohataona, ny Keo Carbon Blade, izay manome ny anarany ny pedal.
Ary samy manana ny isany izy ireo, arakaraka ny tanjaky an'io antsy io ary misy fihenjanana lohataona hafa, miankina amin'ny isa omena azy. Arakaraka ny maha avo ny isa no avo kokoa ny voltage ary azonao atao ny mamadika azy ireo. Avy eo dia misy ny sombin-javatra hafa, noho izany dia manana mpanasa hafa isika, manana ny mitondra, ary avy eo manana ny famaky izay axe titanium amin'ny pedal MAFY, ny Titanium.
Tena mora izany. Ary avy eo dia slot fotsiny eto. Saingy mba hahitako ny fomba itovizany rehetra, dia hijery ao aoriako aho ankehitriny satria misy milina tena milay tokoa izay manambatra ireo sombin-javatra rehetra, ka andao jerena. (mozika jazz malefaka) Ny dingana voalohany dia ny manamboatra lasitra ny ampahany lehibe amin'ny vatan'ny pedal izay ananako eto.
Ary avy eo ny dingana manaraka dia ny fahazoana ireo famantarana LOOK sy sticker kely. Ary izany no fanaovan'izy ireo an'ity trano fivarotana pirinty ity. Atombohy toy izao, raha tsy eo izy ireo ary avy eo mampiasa ny milina dia afaka manonta haingana haingana ireo sary famantarana LOOK ao aminy sy ireo logo kely hafa koa.
Raha mijery ireo fitoeram-bokatra roa ireo ianao dia milay. Mavo ity lovia ity ary manga ity tray ity, ary izany dia fomba tena tsotra izay JEREO ny manasaraka ny pedal havia sy havanana, ka ny pedaly havia dia manga avokoa ary ny pedal ankavanana dia mavo daholo. Amin'izany no itahirizan'izy ireo ny zavatra rehetra manerana ny ozinina mandritra ny fizotry ny famokarana.
Tsotra nefa tsara. (mozika jazz malefaka) Ny singa manaraka izay miditra amin'ny pedalis izay lohataona ravina manan-danja rehetra. Tsia, ity dia iray amin'ireo singa vitsivitsy izay tsy vita tany Frantsa fa raha ny marina ao Tonizia ao amin'ny ozinina LOOK any, noho izany dia heveriko fa tokony halefa any Tonizia isika ary hijery ny fomba nanaovana azy ireo ankehitriny.
Oh, haingana izany. Tonga eto Tonizia àry ny karbaona manta, miendrika fasika goavambe goavambe ary namboarina mialoha miaraka amin'ny resina tsy voatsabo. Ny mitranga izao dia ny horonan-taratasy avy eo dia zaraina ho fizarana ary avy eo ny sosona maromaro dia atambatra ary atambatra ao anaty gazety lehibe iray mba hahatonga ireo faritra laminate ireo ho matevina toa antsika eto.
Ireo fizarana laminate ireo dia ahodin-tànana amin'ity habaka ity mba hanomezana azy ny endrika fizarana efa voafaritra mialoha amin'ny lohataona ravina farany. Ny fizarana laminate dia natsangana avy eo dia napetraka ao amin'ity milina fanentanana ity mandritra ny fito minitra amin'ny 150 degre. Atao ao anaty lafaoro hafa izy io avy eo izay manamafy ny resina.
Ary ny valiny dia ity takelaka miorina mafy ity eto amiko. Saingy mbola lavitra lavitra ny lahatsoratra vita izay hitantsika amin'ny pedal pedal mankany Nevers any France ka azo avadika ho lohataona ihany io. Ireto ny sombintsombiny, izany hoe ny lelany, izay toa azy ireo koa dia avy any Tonizia, ary avy eo ity takelaka lava ity dia tapakaina eto amin'ny lelany 12 tsirairay izay tafiditra anaty pedal.
Avy eo nohosorana ka nahavita famaranana tsara ary ampiharina aminy koa ny famindrana, izany no lazain'ny Keo Blade ary izany koa ny isa, izay manondro ny hamafin'ny tsirairay avy. Cool. (mozika jazz malefaka) Izahay izao dia ao amin'ny efitrano malalaky ny LOOK manangona ny pedal misy azy ary misy tsipika roa, ka eto dia manana ny faritra lohataona ianao izay lohataona no miasa any aoriana ho an'ny pedal keo avy any LOOK, ary eo dia eo ianao. manana ny faritra antsy izay natao ho an'ny lelan'ny Keo Carbon avy any LOOK izay misy ny lohataona lohataona ao.
Ary hitanao fa misy roa, tsara, mizara roa ny tsipika fivoriambe. Izahay dia manana an'io fitohizan'ny mavo eo ankavanana sy manga eo ankavia io mba hitazomana ny pedal hisaraka, koa pedal ankavia eto amin'ity sisiny ity, pedal havanana eo an-daniny rehetra mba hijanona eo izay amonosin'izy ireo ny pedal ary izany ihany no hany toerana izay miaraka izy ireo. Ny dingana voalohany amin'ny fivoriambe dia ny fitondrana ny vatana, ny antsy, ity faritra miverina eto ity ary avy eo ity tsorakazo ity sy ity masinina ity dia hanosika azy rehetra ary hametaka azy eo amin'ny toerany.
Tsara lavitra noho ny ezaky ny tanako. Ny antsasaky ny fivorian'ny tsirairay an'ny Keo Blade Carbon dia fitsapana fanaraha-maso kalitao izay ametrahan'izy ireo an'io masinina io izay manosika azy miverina in-60 hitsapana azy. Ary raha tsy ny fenitra io dia tsy hahomby ary ho tapaka mandritra io fitsapana io.
Aorian'ny fitsapana ny adin-tsaina, ny dingana manaraka dia ny fametrahana ireo axles ao anaty pedal ary izany dia atao eto amin'ity masinina ity izay manosika ny zava-drehetra ho amin'ny toerany. Tena haingana sy manaitra izy io. Tsindrio ny famaky, miditra ihany koa ny fiakarana ary avy eo dia potserina ny faran'ny farany, izay manisy tombo-kase ny zava-drehetra.
Izay hitanao eto. Ka misy iray tsy misy axle ary ho hitanao eo ny faran'ny farany. Tsara, ha? Ny dingan'ny famokarana farany dia ny fametahana ny spindle pedal ao anaty pedal ary misy cap hafa ihany koa, ary izany dia miraikitra ary avy eo dia voahidy, ary avy eo dia voahidy amin'ny tampon-doha haingana tokoa miaraka amin'ny tsela iray nomena.
Mitovy amin'ny tafondro Forme 1 pit lane, milay be. Efa ho amin'ny faran'ny andiam-pamokarana isika. Saingy nahatratra sakana iray izahay izay tsy maintsy resin'ny pedal pedal rehetra izay nataon'i LOOK, ary ny fifehezana kalitao dia zavatra iray reharehan'ny LOOK.
Ka amin'ity boaty ity dia misy pedal izay noho ny antony maro samihafa dia tsy nandalo ny fifehezana kalitao. Ary omena isa avokoa izy ireo ary omena sticker tsy misy loko hafa izay tsy mety amin'izy ireo. Ka inona no hataon'i LOOK? Esory izany, hamerina ireo faritra tsy misy lesoka izy ireo ary hamerina azy ireo eo amin'ny tsipika famokarana sy ireo izay manala azy fotsiny.
Fa mba hahazoana antoka fa mandalo fanaraha-maso kalitao ny vokatra LOOK, dia manana toerana mangatsiaka tena tokony asehoko anao izao izy ireo. Noho izany, jet manainga hery marina. Ity no fitsapana voalohany ary ity masinina ity dia manahaka an-tsaina ny manitsaka pedal, mamoaka ary mametaka indray.
Ary ny zavatra ataon'izy ireo hizaha toetra ny pedal pedal. Manao an'io asa io mandritra ny 24 ora izy ireo ary simulateur ny fampiasana pedal mahery mandritra ny telo taona. Re ao anatin'ny 24 ora. Mahagaga.
Vitanay ny namoy ny tabataba sasany satria niala sasatra ny sakafo atoandro ireo mekanika LOOK. Azoko antoka fa ho faly ireo pedal screze. Ka amin'ny fanandramana manaraka, dia ny fitsapana ny bearings sy ny axe an'ny pedal.
Ka apetraka eto amin'ity milina ity ny pedal. Avy eo dia sintesina miaraka amina entana 90kg izy ary avy eo mandalo tsingerina 2 tapitrisa ary apetraka ao anaty offset ao anaty cam 5mm ihany koa mba hametrahana ny adin-tsaina bebe kokoa amin'ny spindle sy ny bearing fa tsy eo akaikin'ny azy fotsiny Hanodinana ny axe afovoany . Izy ireo koa dia nanaparitaka azy ireo tamin'ny degre dimy ka mangovitra ny pedal raha vao mandeha tsara ny tsingeriny.
Ary tsingerina 2 tapitrisa hatao amin'ny andrana roa, maharitra tapa-bolana vao manao tsingerina 2 tapitrisa. Mahatalanjona izany ary misy fihenjanana goavambe amin'ny pedal. Ao izy mandritra ny roa herinandro ary mikiakiaka.
Tsy mijanona hatreo anefa izany. Ireo pedal amin'ny LOOK ireo dia tena sarotra. Ity milina ity dia mizaha ny tadin'ny pedal sy ny spindle ary maro hafa.
Ary averiko indray, tsy maintsy ho tafavoaka velona amin'izany izy ireo raha te handalo ny fitsapana LOOK ary hiditra amin'ny famokarana. Afa-po izahay fa natao ny fanaraha-maso ny kalitao. Afaka miverina amin'ny faritra fonosana isika.
Te-hiteny aho fa tsy nisy pedal simba tamin'ny famoronana ity lahatsoratra ity, fa lainga izany. Izahay izao dia eo amin'ny faran'ny tsipika dia ny fonosana ireo pedal vita farany izay nandalo ihany koa ny fifehezana kalitao. Ka samy manana ireto boaty ireto isika rehetra.
Ireo boaty baoritra poakaty, tsara, ny fonosana dia noforonin'i LOOK ary natao ihany koa tany Nevers, France ary eo am-pivarotana ny pedal efa vita no apetraka ao ary apetraka ao anaty boaty vita feno izay heveriko fa hifanarahanareo, mamintina tsara ny zavatra rehetra . Ka manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa mahasoa Jereo ny ozinina bisikileta LOOK any Tonizia ary jereo ny fomba nanamboarana ireo zana-kavoana. Tena milay.
Fa maninona no lafo be ny bisikilety?
Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra amin'ny vidin'ny bisikileta dia ny fitaovana. Ny karbaona vita amin'ny karbaona dia misy endrika sy naoty isan-karazany. Arakaraka ny maha avo ny kalitaon'ny karbaona no mampisy ny vidin'ny solika avy amin'ny mpanamboatra. Raha abisikiletampanamboatra ihany koa no manamboatra ny karboniny manokana, io vidiny io dia tsy maintsy averina amin'ny vidin'ny varotra abisikileta.
Ekipa inona no mampiasa bisikileta Look?
Ny bisikileta matihanina avo lentaekipatohanan'nyJereoao anatin'izany i KelmeCosta Blanca, Cr? dit Agricole, CSCTiscali, ary Cofidis. Bisikileta Continental ambaratonga faharoaekipaFortuneo-Oscaro nitainginaJereo ny bisikiletatamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2018.
Inona no atao hoe Keo?
NYlakaolyNy teknolojia dia resahina eo amin'ny tsenan'ny bisikileta sy ny pedal amin'ny lalana, na ho an'ny bisikileta mpifaninana am-pitiavana. Mahomby, mahomby ary mora ampiasaina, nylakaolyKlipika maodely mahazatra ao anaty sy mivoaka tsy misy ezaka, manafina kalitao aryJEREOfahaizana ao ambadiky ny vidiny mirary.
Ohatrinona ny bisikileta mendrika?
nybisikiletaefa nosedraina izahayvidin'nymanomboka amin'ny $ 300 ka hatramin'ny $ 2000. Hitanay fa ny vola bebe kokoa dia mividy fonosana maivana vita amin'ny fibre karbaona, aliminioma (na fitambaran'ireo fitaovana roa), na vy matanjaka sy singa hafa avo lenta. Fa mbola afaka mividy abisikileta tsaradolara zato vitsivitsy monja.04.14.2016
Tsara ve ny pedal an'ny Look Keo?
nyJereo KeoClassic 3 Plus dia pedal ambaratonga fidirana mendrika izay manolotraLEHIBEfanamorana ny fampiasana sy ny sehatra pedaling maharitra. Ary raha ny Classic 3 Plus dia iray amin'ireoJereo itymaodely pedal mora indrindra indrindra, mbola mankafy ny haitao voaporofo hita amin'ny maodely lafo vidy kokoa ihany ianao.4 2021.
Aiza no hividianako bisikileta vaovao?
Ny bisikileta dia azo vidiana an-tserasera na hitahiry ary hanangona amin'ny fivarotanay, izay manome serivisy fanamboarana bisikileta feno sy serivisy ho an'ny atrikasa.
Iza ireo mpanohana ny bisikileta mijery?
Look dia nanohana ekipa nasionaly nandritra ny taona maro izay hatramin'ny am-polony taona maro, ary koa manana hevitra mazava momba ny fomba tsara indrindra hanamboarana ny bisikiletany. Ny aerodynamika dia mitana andraikitra lehibe satria ny tanjona voalohany dia ny hafainganana.
Ny bisikileta fijery T20 mandeha bisikileta vita any Frantsa ve?
LOOK Cycle dia nanambara ny T20, bisikileta mandeha amin'ny fibre karbonika vaovao natao hanampiana ireo atleta frantsay hahomby amin'ny Lalao Olaimpika 2020 any Tokyo. Raha ampitahaina amin'ny R96 teo aloha dia mirehareha fehezam-boninkazo ambany ambany 25% izy, fihenan'ny dragona 11%, haitao géometrika, ary fihenan'ny lanja 880 grama (tsy typo izany).